April 2018 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
လိင်အင်္ဂါအရေပြား နောက်သို့ ဆွဲချ၍ မရခြင်း လိင်အင်္ဂါ နှင့် အရေပြားကိုပုံမှန် နေရာမှန်ရောက်အောင် ပြန်ဆွဲမချနိုင်ခြင်း ရာသီဥတု ပူအိုက်တဲ့ ညနေခန်းတစ်ခုမှာ ပိုင်နီမောင်တစ်ယောက် ဆေးခန်းထိုင်နေရင်း သားအမိနှစ်ယောက်ဆေးခန်းလာပြပါလေရဲ့.. မေ – ကျွန်မသားလေးရဲ့ ငယ်ပါထိပ်က ယောင်နေတယ်.. ပြီးတော့ နာနေတယ်လို့…
မမဗိုက်တို့အတွက် နွေရာသီတွင် ဝတ်စားဆင်ယင်မှု နဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှု မြန်မာပြည်ရဲ့ နွေရာသီဟာ သာမန်လူတွေအတွက်တောင် ပူလွန်းလှပြီး တကယ် ဂရုစိုက်ရတဲ့ ရာသီဖြစ်ပါတယ်… ကိုယ်ဝန်ဆောင် မမဗိုက်တို့အတွက်ဆို ပိုတောင်ဂရုစိုက်ရမပေါ့.. အထူးသဖြင့် အပူပိုင်းဒေသတွေမှာနေတဲ့ မမဗိုက်တို့ပေါ့… ?? အဝတ်အစား?? ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ အချိန်တွင်…
သုတ်ပိုးလေးတွေ သေစေလို ကိုယ်ဝန်တားဖို့ အတွက် နည်းပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့ အထဲက သုတ်ပိုးသေစေတဲ့ဆေး ရှိတယ် ဆိုတာကော သိကြရဲ့လား။ အဲ့ဆေးက ဘာဆေးလဲ။ အသုံးအများဆုံးဆေးကတော့ Nonoxynol-9 ဖြစ်ပြီး အခြားဆေး အမျိုး အစားတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ နာမည်အမျိုးမျိုး၊ တံဆိပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ရောင်းချနေကြပါတယ်။…
တိတ်တဆိတ် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း Missed abortion ဆိုတာ… ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိူးသမီးအနေနဲ့ မိမိကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတယ်ဆိုတာ မသိလိုက်ဘဲ… မိန်းမကိုယ်ကနေ သွေးဆင်းတာ၊ ဆီးစပ်ကိုက်တာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ သားပျက်သားလျှောခြင်းကို ခေါ်တာပါ…. ကိုယ်ဝန်ပထမ သုံးလနဲ့ ဒုတိယ သုံးလ မှာ ဖြစ်နိုင်သော်လည်း အဖြစ်အများဆုံးကတော့… ကိုယ်ဝန်ပထမသုံးလမှာ ဖြစ်ပါတယ်…….
ကွမ်းအစားများသော မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သေမင်းတမန်တစ်ပါး သို့မဟုတ် ခံတွင်းကင်ဆာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဖြစ်အများဆုံးသွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါနှစ်ခုဖြစ်သော သွားပိုးစားခြင်းနှင့် သွားဖုံးရောဂါတို့အပြင် အဖြစ်များ၍ အန္တရာယ်ကြီးမားသော အခြားသွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်ခုမှာ ခံတွင်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်သည်။ ခံတွင်းကင်ဆာသည် အခြားသောကင်ဆာများနည်းတူ ကြောက်စရာကောင်းပြီး အချိန်မီ ကုသမှု မခံယူပါက အသက်အန္တရာယ်ပါ ရှိနိုင်သော…
အမျိုးသားများ မျိုးမပွားနိုင်ခြင်း အမြဲ မမဗိုက်တို့၊မေမေတို့အတွက် ရေးနေရတာမို့ .. ဒီခါမှာတော့ အမျိုးသားများအတွက် ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ရေးလိုက်ပါသည်.. အချိန်ကာလတွေပြောင်းလဲလာသလို မိမိတို့နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးပေါ်က လူဦးရေက ပိုပိုတိုးလာပါတယ်…ဘာကြောင့်လဲ?… မျိုးပွားခြင်း(reproduction)ကြောင့်ပဲပေါ့.. အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက် ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ မျိုးပွားမယ်.. လူဦးရေတွေ တိုးပွားမယ်…..
နှစ်ရှည်ခံ ကိုယ်ဝန်တားနည်းနှစ်ခုရဲ့ ကွာခြားချက် (၇)ချက် ရေးသားသူ – ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကာလရှည်ကြာ ကိုယ်ဝန်တားတော့မယ်ဆိုရင် အသုံးပြုလို့ ရတဲ့ နည်းလမ်းနှစ်ခု ရှိပါတယ်။ လက်မောင်းထဲထည့်တာနဲ့ သားအိမ်ထဲထည့်တာပါ။ အဲဒီနှစ်ခုထဲက ရွေးချယ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့ ဘယ်ဟာသင့်တော်သလဲ စဉ်းစားနိုင်စေဖို့…